भारतबाट चाडपर्वको कोसेली ‘ओमिक्रोन’ भित्रिने डर – Health Post Nepal
२०७८ पुष २२ गते १५:०१
काठमाडौं – नेपालमा ओमिक्रोनको तेस्रो भेरियन्ट पुष्टि भएको दुई साताभन्दा बढी बितिसक्यो। यसबीच थप संक्रमण पुष्टि भएका छैनन् तर सन्त्रास बढेको छ। पुस ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्रले तेस्रो केस पनि देखिएको पुष्टि भएको बताइरहँदा नेपालमा पनि तेस्रो लहर चाँडै फैलिने आंकलन गर्न थालियो।
त्यसअघि गत मंसिर २० गते मन्त्रालयले दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आएका दुई विदेशी नागरिकमा ओमिक्रोनको सैक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको थियो। मन्त्रालयले हालसम्म नेपाल आएका तीनजनामा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको छ।
भारतमा बढ्दा नेपालमा चिन्ता
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अहिले नेपालमा ओमिक्रोन भित्रिने डर बढेको छ। भारतमा संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा चिन्ता थपिँदै जान्छ। अधिकांश नेपालीहरुको रोजगारीको गन्तव्य भारत नै हो। भारतमा अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर आइसकेको छ। बिहीबारमात्रै भारतमा ९० हजारबढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ओमिक्रोन संक्रमण पनि तीव्र गतीमा बढिरहेको छ। ओमिक्रोनकै कारण भारतमा बिहीबार पहिलो मृत्युसमेत भएको छ।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार ९० हजार ८५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो ७ महिनायताकै सबैभन्दा धेरै हो। यसअघि १० जुनमा ९१ हजार ८ सय ४९ मा संक्रमण देखिएको थियो। भारतमा हलसम्म साढे ३ करोडभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ३ करोड ४३ लाख निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ४ लाख ८२ हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार पुगेको छ। भारतमा हालसम्म ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या २ हजार ६८५ पुगेको छ।
भारतमा तीव्र गतिमा बढ्दो संक्रमणले नेपालमा चिन्ता थप्दै जान्छ। भारतसँगका नेपालका सिमानाका व्यवस्थित नहुँदा जसरी पहिलो लहरमा सहजै कोरोना प्रवेश गर्यो त्यसैगरी ओमिक्रोन पनि त्यहीँबाट भित्रिने खतरा छ। अव्यस्थित सिमानाका त छँदैछ त्यसमाथि झन् नाकामा नै परीक्षणमा हुने व्यवास्ताका कारण ओमिक्रोन भित्रिने जोखिम अझै बढेकोमा स्वास्थ्यविज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भारतमा संक्रमण बढ्न थालेसँगै नेपाल फर्कनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। माघेसंक्रान्ति मनाउन घर फर्कनेको घुँइचो पनि सीमामा देख्न सकिन्छ। माघेसंक्रान्ति सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो चाड नै हो। यसले भारतबाट संक्रमण भित्रिने जोखिम बढाएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताए।
सुदूरपश्चिम भित्रिने प्रमुख नाका गड्डाचौकी र गौरिफन्टामा उच्च सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बताए पनि परीक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सुनारले सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्वास्थ्य कार्यालयहरुले भारतबाट स्वदेश फर्किनेलाई एन्टिजेन टेष्टका साथै कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान तीव्र रुपमा अघि बढाएका बताए।
उनले ओमिक्रोनको उच्च जोखिममा कञ्चनपुर र कैलाली रहेको बताए। ‘दिल्लीमा संक्रमण बढिरहँदा अरुभन्दा हामी बढी जोखिममा छौं’, उनले भने, ‘त्यसैले भारतबाट आउनेको कोरोना परीक्षण र खोप लगाउने प्रबन्ध गड्डाचौकी नाकामै मिलाएका छौं।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले ओमिक्रोन संक्रमण सुदूरपश्चिममा भित्रिन नदिन सीमानाकामा कडाइका साथ चेकजाँचको व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सिमानामा नै हेल्थ डेस्कमार्फत परीक्षणदेखि खोप अभियान चलाइएको बताए।
पछिल्लो केही दिनयता पुनः सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार एक हप्ताभित्रमा नयाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या १६२ पुगेको छ। विशेषगरी भारतबाट घर फर्किएकाहरुमा चेकजाँचका क्रममा संक्रमण देखिन थालेको छ। उनीहरुमा ओमिक्रोनको संक्रमण हुनसक्ने आशंकासमेत गरिन थालिएको छ।
ओमिक्रोन हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्न केही नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं पनि पठाइएको जोशीले बताए।
दक्षिण अफ्रिकामा अस्वाभाविक रुपमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि ९ नोभेम्बरमा संकलन गरिएको नमूनाको जेनेटिक विश्लेषण गर्दा बी.१.१.५२९ भाइरस पत्ता लाग्यो। सो भाइरसमा अत्यधिक जेनेटिक कोडमा परिवर्तन देखिएपछि २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सो नयाँ भाइरसको बारेमा जानकारी दियो र २६ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ संगठनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सो भाइरसलाई ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नामकरण गर्‍यो र यसलाई ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ अन्तर्गत राख्यो।
त्यसको ९ दिनपछि यो नेपालमा पनि पुष्टि भयो। त्यसअघि नै सरकारले अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको थियो तर उक्त भेरियन्ट नेपाल प्रवेश गर्यो। त्यसयता सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। सीमानाकामा कडाइ र परीक्षणको दायरा बढाउँदै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध र आइसोलेसन सुधारमा सरकार उदासिन बनेको छ। तर, जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर सतर्कता र रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले तेस्रो लहर कहिले आउँछ भनेर किटान गर्न नसकिने भए पनि भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि संक्रमण फैलिने जोखिम भएको हुँदा त्यसको तयारीमा लागिसकेको बताए। उनले सीमानाकामा विशेष सतर्कता अपनाए केहीहदसम्म संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने हुँदा यसबारे विज्ञ तथा सरकारी पक्षसँग समन्वय र छलफल भैरहेको बताए।
उनले ओमिक्रोन भित्रिन नदिन नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको, सिमानाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको बताए। ‘परीक्षणको दायरा बढाउँदै यसले संक्रमणको चक्र तोड्न मद्दत गर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सम्पर्कमा आएकाको व्यक्तिको परीक्षण, नाकामा परीक्षण, समुदायमा परीक्षणलगायतको काम अघि बढाइरहेको छौं।’, उनले भने।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले ओमिक्रोन भित्रिन नदिन सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिँदै सातवटै स्वास्थ्य निर्देशनालय, ७७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको बताए। ओमिक्रोनल त्यति घातक नभएको अध्ययनहरुले देखाएपनि सतर्कता आवश्यक रहेको उनले बताए।
बढ्दै दैनिक संक्रमितको संख्या
नेपालमा ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम बढेको मात्र छैन कोरोना संक्रमितको संख्या पनि निरन्तर उकालो लाग्दो छ। गत एक हप्ताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कुल २ हजार ४४८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। सातमा सबैभन्दा बढी गत बुधबार ४३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हाल देशभर ५ हजार २२५ जना सक्रिय संत्रमित रहेका छन् भने अहिलेसम्म ११ हजार ६०१ जनाको संक्रमणका कारणले निधन भएको छ।